Some Zimbabweans Plan to Protest Mugabe Funeral » Spotlight Zimbabwe
Some Zimbabweans Plan to Protest Mugabe Funeral
Mugabe’s funeral arrangements have become a matter of controversy as his body makes its way back to Zimbabwe. Local outlets reported this week that there was some discord between the government of Zimbabwe, who wished to bury him with other communist leaders in Harare, and family members who sought the full funeral rites of a Shona chief that they believed Mugabe deserved.
Patrick Guramatunhu on 11. September 2019 at 23:19
All Chamisa and his fellow MDC leaders want is power and they have shown they will do anything to secure it. They sold-out during the GNU by failing to implement even one reform. Chamisa is so thrilled Mugabe voted for him he immediately forgave the murderous thug for all the opposition supporters beaten and murdered by Zanu PF.
Mugabe and his Zanu PF cronies were no different, they too sold-out on the revolution principles, rigged elections and even committed mass murders for selfish political gain.
What Zimbabwe needs is principled national leaders with the nation’s interests at heart!